Who were Bengali, so called Rohingya?: သင့်ရဲ့ မဲတခုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ကာကွယ်ပါ။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ လက်ထက်တုန်းက အင်္ဂလိပ်တို့ ဂျပန်တို့ကို သေနပ်တွေ ဘောပင်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ရတယ်ဆိုရင် ခေတ်သစ်ကုလား(ဘင်္ဂလီ)ကောင်တွေကို သင်တို့ရဲ့ ထောက်ခံမဲ တချက်နဲ့ တိုက်ခိုက်ပေးပါ။ Form လေးမှာ ထောက်ခံမဲလေး ထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲ။ အကယ်လို့ ဒီအကောင်တွေကို အခုကတည်း မရှင်းထားလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင် နောက်တချိန်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ ၀ါးမျိုခြင်းကို လှလှပပခံရလိမ်မယ်။ ပထမဆုံး
ဒီ http://apps.facebook.com/petitions/1/stop-rohingya-invasion-into-burma/ ကိုသွားပါ။ ကျနော် ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်။
(1) Mr. , Mrs, ကျားလား၊ မလား ရွေးပေးပါ။
(2) First Name ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ရဲ့ ပထမအမည်။
(3) Last Name ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ရဲ့ နောက်ဆုံးအမည်။
(4) Country ကိုယ်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
(6) Zip/Postal Code ကိုယ်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံရဲ့ ကုဒ်ပါ။( 63110 - ဒါက ထိုင်းနိုင်ငံ ကုဒ်ပါ)
(7) City ကိုယ်နေထိုင်ရာ မြို့ပါ။
(8) State ကိုယ်နေထိုင်ရာပြည်နယ် တခုကို ရွေးပေးပါ။
(9) Email ကိုယ်သုံးနေတဲ့ အီမဲလ်ကို ထည့်ပေးပါ။ (မသင်္ကာဘူးဆိုရင် မသုံးတဲ့ အီမ်လ်ကိုသုံးရင်လည်းရပါတယ်။)
(10) Sign Now ဆိုရင် ရပါပြီး
ကဲ ..... မိတ်ဆွေတို့ ခေတ်သစ်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးကို သင်ရဲ့ တာဝန်သိစိတ်နဲ့ ဖောင့်လည်း ပေးလိုက်ကြရအောင်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကုဒ်တွေပါ။ http://www.myanmars.net/myanmar/postal-codes.htm
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 7:23 PM
ထိုင်းတောင်ပိုင်းက မူဆလင်တွေက အရှေ့က သိမ်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမူဆလင်တွေက အနောက်ရခိုင်ပြည်က ဖေါက်မယ်။ ပြည်တွင်းကရှိပြီးသားတို့ မူဆလင်ညီအကိုတွေက အချက်အချာကျတဲ့နေရာတွေမှာ နေရာယူ..အချိန်ကျရင်ဓားဆွဲပြီးသာလာခဲ့။ ဒို့ မူဆလင်ညီအစ်ကိုတွေ ဟာအစ္စလာမ်ရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာ တစ်သွေးတည်းတစ်သားတည်းဆိုတာ ဒင်းတို့ သိစေရမယ်။ ဒို့ မူဆလင်ညီအစ်ကိုတွေ အရှေ့အနောက်ညှပ်သိမ်းရင် ဒီဗုဒ္ဓဘာသာ နှစ်နိုင်ငံဘာခံနိုင်မလဲ
လုပ်လိုက်လေ ဗမာဓား ဘယ်လောက်ထက်လဲပြရသေးတာပေါ့၊
ကုလား၇ဲ့ အဖေ said...
မင်းတို့ ကုလားတွေကခေတ်ပျက်မှ ခေါင်းထောင်တဲ့ ကောင်တွေပါ...ဦးနေဝင်းလို ကုလားတွေကိုပြတ်ပြတ်သားသား မောင်းထုတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်လာ၇င်တော့ကွာ...
We are not stupid enough to becomeadog!!! Understand?
we cannot accept those attitude. Our nations, please think of the way how to drive the dogs away.
ဟေ့ ခွေး ၀ဲ စား ကုလားတွေ၊ အရှက်တရားမရှိတဲ့ကောင်တွေ ဒို့ဗမာ့
သတ္တိကို မသိကြဘူးလား စမ်းကြည့်လိုက်လေ ဗမာ့ဓါးဘယ်လောက်
ထက်တယ်ဆိုတာ သိစေရမယ် ချိုသလား ခါးသလား မြည်းကြည့်လိုက်စမ်းပါ
၁။Irrawaddy blogger,Mizzima,DVB,RFA, VOA,BBC သတင်းဌါနအားလုံးသည် မည်သူ့ကိုသာစေ၊နာစေ
သဘာမထားပါ၊လွတ်လပ်သော သတင်းဌါနများပီပီ အ
မှန်ကိုအမှန်အတိုင်းဖွင့်ချ ဝေဖန် ရေးသားဖော်ူပလေ့ရှိ
သော၊အေူပာအဆိုအရေးအသားမဆင်ူခင်တတ်သော၊သမိုင်းလိမ် သမိုင်းညာ များဖြင့်အာပြဲအောင် ဟောင်
နေသော ဘင်ဂါလာဒေရှ့်နိုင်ငံသား ရခိုင်အမည်ခံ ရခိုင်တု တစ်စုအတွက် BBC,VOA ဘင်ဂါလာဌါနမှ
လှိုက်လဲစွာ ဋ္ဌကိုဆိုပါေုကာင့်သတင်းကောင်းပါးလိုက်
ချယ်ပြီ ဆုများချီမြင့်ကာမိမိနေထိုင်ရာ စစ်တကောင်း
စောက်ကုလားက ပြောင်းပြန် အိမ်ဦးခန်းချီး
ဘယ်သူမှမထောက်ခံတာကွ အဲလို လိမ်လို့
စောက်ကျင့်မကောင်းလို့ ကုလားဖြစ်လို့ တို့
တိုင်းရင်းသားမပေးတာကွ သိရဲ့လား ကိုယ်မေ